समस्याको दलदलमा नेपाली विद्यार्थी आफैं फसेका हुन्
असार २२, २०७५| प्रकाशित १९:०९
हामीले उनीहरुलाई समस्यामा पारेका होइनौं। व्यापारका लागि खोलिएका यहाँका मेडिकल कलेज गुणस्तरहीन छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि पढ्न आउनु उनीहरुको गल्ती हो। यस्ता कलेजमा भर्ना भएपछि समस्या त परिहाल्छ नि। यहाँका गुणस्तरहीन कलेजमा किन भर्ना हुने? हामीले होइन, नेपाली विद्यार्थी आफैंले यो समस्या सिर्जना गरेका हुन्। हामीले कालोसूूूचीमा राखेका कलेजमा समेत नेपाली विद्यार्थी पढिरहेका छन्। यसमा हाम्रो के दोष? हामीले त सूूूची नै निकालेका छौं। यहाँ मान्यता पाएका कलेजको गुणस्तर त कमजोर छ भने कालोसूूूचीमा भएकाको के हालत होला? त्यसकारण समस्याको दलदलमा नेपाली विद्यार्थी आफैं फसेका हुन्। नेपालका दलालले उनीहरुलाई फसाएका हुन्।
नेपालको मेडिकल काउन्सिलले हामीलाई फलानो कलेजले मान्यता पाएको छ वा छैन भनेर सोधेपछि हामीले छ भने छ, छैन भने छैन भनेर जानकारी दिने हो। मैले अघि भने नि, दबाबका भरमा मान्यता पाएका कलेज पनि छन् यहाँ। त्यही भएर मान्यता पाएको छ भन्दैमा सबै राम्रा छन् भन्न सकिँदैन। यसका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकले पनि कलेजबारे बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा नेपालको मेडिकल काउन्सिलमा पनि त निकै भ्रष्टाचार छ नि। त्यहाँ चुनावबाट पदाधिकारी छानिने गर्छ। त्यो क्रममा कति धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि बुझेको छु।
स्थलगत शृंखला-१ः बंगलादेशमा नेपाली विद्यार्थी पढ्ने ८० प्रतिशत मेडिकल कलेज गुणस्तरहीन